people Nepal » विमानस्थलमा पनि सेना ! विमानस्थलमा पनि सेना ! – people Nepal
विमानस्थलमा पनि सेना !
विराटनगर, १५ मंसिर । उम्मेदवार र चुनावी सभालाई लक्ष्य गरी बम विस्फोटका घटनामा वृद्धि भएपछि सुनसरीमा सेनाले गस्ती बढाएको छ। मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनका क्रममा आपराधिक समूहले बम विस्फोट गराउन सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा अब सेनाले निगरानी बढाएको हो।
सुनसरीका चारै निर्वाचन क्षेत्रका एक सय ६६ मतदानस्थल र पाँच सय २७ मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्ने गरी बिहीबारदेखि सेना सक्रिय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए।
सुनसरीका एक सय ६६ मतदानस्थल र पाँच सय २७ मतदान केन्द्रको सुरक्षामा नेपाली सेना ।
‘हामीले आदेशअनुसार जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्ने प्रयास गरेका छौं’, उनले भने, ‘विमानस्थल, कारागार, अन्तरजिल्ला सिमाना, दलका उम्मेदवार र द्विदेशीय सिमाना प्राथमिकतामा परेका छन्।’ अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।